သုက်ရည်ဒီဇိုင်းကာလာ ပြောင်းနေပြီလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် သုက်ရည်ဒီဇိုင်းကာလာ ပြောင်းနေပြီလား?
ယောကျာ်းလေးတွေ အားလုံးမှာ အသက် ကြီးငယ်မရွေး မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး တွေ့ကြုံရတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ အနည်းနဲ့အများ ရှိနိုင်ပါတယ်။
လိင်တံထောင်မတ်နိုင်စွမ်းမရှိတာ၊ အတူနေတဲ့အခါ သုက်ကို ကြာကြာထိန်းမထားနိုင်ဘဲ ခဏလေးနဲ့ ပြီးတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေအပြင် အတွေ့များတဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ သုက်ရည် အရောင်ပြောင်းတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ သုက်ရည်ဆိုတာ ပုံမှန်အားဖြင့် နို့နှစ်ရောင်ရှိပြီး အမိုင်နိုအက်စစ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ပရိုတိန်း နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့သုက်ရည်ရဲ့ တစ်မီလီမီတာ ပမာဏမှာ အနည်းဆုံးသုက်ပိုးပေါင်း ၁၅ သန်းကနေ သန်း ၂၀၀ နီးပါးထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
သုက်ရည်ရဲ့ အရောင်အသွေးက တခါတလေမှာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်က ပြောင်းလဲတတ်ပေမယ့် ဒီလို နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် ယာယီ သုက်ရည်အရောင်ပြောင်းတာက စိုးရိမ်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာသည့်တိုင်အောင် သုက်ရည်အရောင်က ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ သုက်ရည်ရဲ့ အရောင်အလိုက် ဘယ်လို ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိနေနိုင်လဲ ဆိုတာ သိလိုရာမေးက ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
(၁) ဝါဖန့်ဖန့် အရောင်ရှိတဲ့ သုက်ရည်
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သာမန်အားဖြင့် ဆီးသွားပြီး မကြာခင် ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ သုက်ရည်က သာမန် နို့နှစ်ရောင်ကိုမှ ဝါဖန့်ဖန့် အရောင်ရောထွေးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီသဘောက သုက်ရည်က ဆီးလမ်းကြောင်းကနေ တဆင့် ဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆီးအကြွင်းအကျန်တွေ ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တခါတလေမှာ ဒီလိုဝါဖန့်ဖန့်အရောင်ရှိတဲ့ သုက်ရည်က ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် အရောင်က ဝါဖန့်ဖန့်ထက် ပိုပြီး အဝါရင့်ရောင် ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ ဆီးကျိတ်ရောင်တာ တွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
(၂) ပန်းရောင်၊ အညိုပုပ်ပုပ် နဲ့ သွေးရောင် ရှိတဲ့ သုက်ရည်
ပန်းရောင် နဲ့ သွေးရောင် (အနီရောင်) ရှိရင်တော့ ဒါဟာ သုက်ရည်ထဲမှာ သွေးပါတဲ့ လက္ခဏာလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ သွေးပမာဏအလိုက် အရောင် အနုအရင့် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဝါဖန့်ဖန့်အရောင်ရှိတဲ့ သုက်ရည်နဲ့ မတူညီတာ တစ်ခုကတော့ ဒီလို အရောင်ရင့်ရင့်ရှိတဲ့ သုက်ရည်က ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ အောက်မှာပြောထားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ သုက်ရည်တွေက ပန်းရောင်၊ အညိုရောင်နဲ့ သွေးရောင် ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
ဆီးကျိတ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ ခွဲစိပ်မှု ခံယူထားသူတွေ
လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ကလာမိုင်းဒီးယား လိုမျိုး STIs ရောဂါတွေ ခံစားနေရသူတွေ
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ လိင်တံကင်ဆာ ခံစားနေရသူတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အမည်းရောင်သန်းနေတဲ့ သုက်ရည်
သုက်ရည်က အပေါ်က နှစ်မျိုးနဲ့မတူဘဲ မည်းညစ်ညစ် အရောင်မျိုး ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဒီလက္ခဏာက နှစ်ရှည်လများ ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ သေွးဟောင်းတွေ ရောနှောနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အမည်းရောင် သုက်ရည်မျိုး ရှိတတ်တဲ့ သူတွေက အများအားဖြင့် အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ကျောရိုးမကြီး ထိခိုက်သွားသူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး တခါတလေမှာလဲ သုက်ရည်ထဲမှာ ရှိသင့်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုပြီး သတ္ထုဓာတ်များနေတဲ့ သူတွေမှာလဲ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်ကို သွားရောက်ပြသသင့်လဲ?
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အစားအသောက်၊ နေထိုင်မှုပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး တခါတလေမှာ သုက်ရည်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာပြောင်းနိုင်ပေမယ့်လဲ တခြားသော လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့
ဆီးသွားရတာ ခက်ခဲနေမယ်၊ ဆီးမသွားနိုင်ဖြစ်မယ်…
လိင်အင်္ဂါအနီးတဝိုက်မှာ နာကျင်မှု ခံစားရမယ်၊ အဖုအပိန့်တွေ ထမယ်…
မူမမှန်တဲ့ သုက်ရည်အရောင်ပြောင်းပြီးချိန်နောက်ပိုင်း ဖျားနာမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြလာမယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြသသင့်ပါတယ်။